कति हट, कती क्युट कियारा ? [१५ तस्विर] – Taja Khawar
कति हट, कती क्युट कियारा ? [१५ तस्विर]
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०१, २०७८ समय: ११:५१:२९
बलिउडमा कियारा आडवाणी छोटो समयमा धेरै नै लोकप्रियता प्राप्त गर्ने अभिनेत्रीको रुपमा चिनिन्छिन् ।
उनले एक पछि अर्को गर्दै राम्रो राम्रो फिल्महरुमा अभिनय गर्दै आफुलाई सफल अभिनेत्रीको रुपमा उभ्याउन सफल भएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनलाई फलो गर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्नुले पनि उनको लोकप्रियता चुलिदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । इन्टाग्राममा उनको १ करोड ७५ लाख फलोवर्स पुगिसकेका छन् । उनको नशालु हेराइले धेरैलाई मोहित पार्ने गरेकी छिन् ।
चलचित्र ‘कविर सिंह’ हिट भएपछि उनको माग बलिउडमा बढेको थियो । कियाराको गतबर्ष चलचित्र ‘कविर सिंह र गुड न्यूज’ सुपरहिट भए ।
सुशन्त सिंह राजपूत स्टारर फिल्म ‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ मार्फत् बलिउडमा आफ्नो करियरको सुरुवात गर्ने नायिका कियारा लाई ‘करिब सिंह’मा उनको भूमिकाले स्टार बनाइदियो । कियारा अक्षय कुमारसँग फिल्म ‘लक्ष्मी’ मा पनि देखिएकी छिन् ।
‘लक्ष्मी’ को रिलिज अघि कियारा आडवाणीको एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा उनले आफूलाई से$सभन्दा मज्जा लाग्ने ती तीन चीजबारे बताएकी छिन् ।
कियाराको यो भिडियो ‘ट्वीक इन्डिया’ ले सेयर गरेको छ । यसमा नायिकाले केही रमाइला प्रश्नको जवाफ दिइरहेकी छिन् । कियारालाई यति बेला प्रश्न सोधियो, ‘यदि तपाईंलाई कुनै किरा बन्ने मौका पाएमा के बन्न चाहन्छिन् ?’ यसको जवाफ दिँदै नायिका भन्छिन्, ‘क्याटरपिलर ता कि पछि पुतली बन्न सकूँ ।’
त्यसपछि नायिकालाई सोधियो, ‘ती कुन तीन चीज हुन् जसलाई तपाईं से$स भन्दा उत्कृष्ट मान्नुहुन्छ ?’ यसको जवाफ दिँदै नायिकाले भनिन्, ‘शानदार पिज्जा, शपिङ र एउटा राम्रो फिल्म ।’
कियारालाई थप सोधियो, ‘के तपाईंको जीवनमा कुनै डरलाग्दो घटना घटेको छ, जसमा तपाईं मृत्युको मुखमा पुग्नुभएको थियो ?’ यसको जवाफमा उनी भन्छिन्, ‘जब म कलेजमा पढ्थेँ तब म आफ्ना साथीसँग घुम्न गएकी थिएँ । त्यतिबेला हाम्रो कोठामा आगलागी भएको थियो । मलाई लागेको थियो कि त्यो दिन मेरो ज्यान नै जान सक्थ्यो ।’
सामाजिक संजालबाट लिइएका उनका केहि तस्बिरहरू हेराैँ
Last Updated on: May 15th, 2021 at 11:51 am